एभिन्युज टिभिका मालिक भाष्करराज राजकर्णिकार 'जग्गा दलाली धन्दा'मा : ठगीको आरोप ! | Diyopost
जग्गा दलाली धन्दा
काठमाडौं, ८ असोज । प्रतिष्ठित मिडिया उद्यमीको रुपमा आफुलाई चिनाउँदै आएका एभिन्युज टेलिभिजनका मालीक भाष्करराज राजकर्णिकारले टेलिभिजनको आडमा जग्गा दलाली धन्दा गरेको पाइएको छ । उनीबाट केही व्यक्तिहरु ठगीएको समेत पाइएको छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २७ मेघौली स्थित अन्द्रौलीमा रहेको ७० कट्ठा जग्गा खरिदका लागि भन्दै चितवनका आधा दर्जन युवासँग करोडौं रुपैयाँ उठाएर कर्णिकारले ती युवाहरुलाई रकम नै नभएको चेक दिएर ३ वर्षदेखि ठगि गर्दै आएको पाइएको हो ।
राजकर्णिकारबाट आफूहरु नराम्रोसँग ठगिएको भन्दै चितवनबाट केही युवाहरुले दियोपोस्टलाई सम्पर्क गरेका छन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २७ स्थित रहेको अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीको स्वामित्व रहेको ताज सफारीको साँधको जग्गा किन्न भन्दै ती युवाहरुबाट कर्णिकारले करोडौं रुपैयाँ लिएका थिए ।
‘जग्गा किन्न पर्यो सस्तोमा आएको छ । फाइदा हुन्छ तिमीहरुले एक करोड २५ लाख रुपैयाँ हाल तिमीहरुलाई करोड थपेर दिन्छौँ । ठीकै छ एक करोड रुपैयाँ आउँछ भने भनेर हामीले पैसा उठाएर काठमाडौंको चप्पल कारखाना नजिकै रहेको वन बेल्ड वन रोड इनिसियटिभसँगै रहेको कार्यालयमा गएर भाष्करलाई भेटेका हौँ,’ ती युवाले दियोपोस्टसँग भने ‘बेलुका बैना गर्छौं र फेरी बैना पनि बुझ्छौँ । एक दुईदिनमा काम भ्याउँछौँ । भाष्करले तिमीहरु किन जान पर्यो । म कारोबार मिलाउँछु भनेपछि हुन्छ भनेर हामी लाग्यौँ ।’
ती युवाहरुलाई भाष्करले १ करोड २५ लाख रुपैयाँ लिएपछि थप एक करोड बढाएर २ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक दिएको उनीहरुको भनाई छ । तर रकम नै नभएको चेक दिएर लामो समयसम्म झुलाएपछि पीडितहरुले मुद्दा मामिला गर्ने चेतावनी दिएका थिए । बदलामा कर्णिकार आफैले पटक पटक लिखित कागज समेत गरेको पाइएको छ ।
चितवनकै घरजग्गा व्यावसायी पदमेश्वर बरालसँग भाष्करले आफै लिखित सम्झौता गरेका छन् । ‘पद्मेश्वर बराल भनेको एक जना राम्रो रियल स्टेटको व्यापारी पनि हो । उहाँकै नाममा हामीले चेक पनि बुझ्यौँ । उहाँकै नाममा संयुक्त कागज पनि गर्यौँ । भास्करले दिएको २ करोड २५ लाखको चेक पनि बुझ्यौँ । सबैको आ–आफ्नो चेक पनि बाढयौँ,’ ती पीडित युवाको गुनासो छ,‘निरन्जन रेग्मी भन्ने व्यक्ति चितवनमा घर जग्गा कारोबार गर्ने भाष्करको पार्टनर हो । उनैले हाम्रो चेक फिर्ता लाने र साटेर दिन्छु भन्ने गर्न थाल्यो । हामीले त्यति ठूलो मिडियाको मान्छे भनेर विश्वास गर्यौँ । अहिले ३ वर्ष भयो मसँग चेक र कागजात छ तर, एक पैसा पाएको छैन ।’
२०७४ भदौमा कर्णिकारले गरेको कागजातमा आफूले पदमेश्वर बराल लगायतबाट रकम लिएको स्विकार गरेका छन् । उनले जग्गा खरिदका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ लिएर २ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक दिएको समेत उक्त कागजातमा उल्लेख गरेका छन् ।
पीडितहरुका अनुसार उक्त जग्गा प्रति कठ्ठा ३ लाख ३५ हजारमा खरिद गरिएको थियो । सँधियार समेत चौधरी समुहलाई उक्त जग्गा प्रतिकट्ठा १० लाख रुपैयाँको दरले बेचिएको स्रोत बताउँछ । तर, जग्गाको नाफा आर्जन गरेपछि कर्णिकारले शुरुमा सामुहिक लगानीमा समलग्नहरुको रकम समेत ठगि गरेको पीडितहरुको आरोप छ ।
‘त्यो जग्गा विनोद चौधरीलाई बेच्ने कुराभयो । हामी मिलेर लगभग ३ लाख ६५ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले जग्गा किन्यौँ । उक्त जग्गा किन्दा एक करोड २५ लाख रुपैयाँ हामीले हाल्यौँ । चीतवनको हामी केही साथीहरु पनि थियौँ । त्यो जग्गा प्रति कठ्ठा १० लाख रुपैयाँमा बेच्ने उनीहरुको योजना रहेछ ,’ भाष्करबाट पीडित बनेका ती व्यक्तिको भनाई छ,‘जग्गा करिब ७० कट्ठा थियो । त्यसमा करिब १०/८ करोड नै फाइदा हुने कुरा थियो होला । हामीलाई पैसा मात्रै हाल्न लगाइयो ।’
स्रोतका अनुसार कर्णिकारबाट चार जना युवाहरु नराम्रोसँग ठगिएका छन् ।
कर्णिकारले स्थानिय युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने पद्मेश्वर बरालको नाममा दिएको ब्ल्याङ्क चेक समेत दियोपोस्टले फेला पारेको छ । उनले २०७४ साल कार्तिक ३ गते दिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चेक समेत फेला परेको छ । तर, यो चेक हालसम्म पनि साटिएको छैन ।
मिडियाको आवरणमा जग्गा दलाली धन्दा गर्दै आएका भाष्कर नेपाल उद्योग वार्णिज्य महासंघका पूर्व बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन् । उनी बुधबार मात्रै मिडिया एलाइन्स नेपाल म्यानको अध्यक्ष चयन भएका छन् ।
दियोपोस्टको प्रश्नमा भाष्करको जवाफ
दियोपोस्ट डटकमले यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन एभिन्युज टेलिभिजनका मालिक भाष्करराज राजकर्णिकारलाई सम्पर्क गरेको थियो । प्रस्तुत छ उनको संक्षिप्त कुराकानी ।
तपाईं समलग्न भएर भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २७ मा खरिद गरिएको भनिएको ७० कट्ठा जग्गा प्रकरण के हो ?
– ७० कट्ठा कसले किनेको ?
तपाईंहरुले किन्नु भएको होइन ?
मैले त किनेको छैन ।
भाष्कर कर्णिकारले ठग्नु भयो भनेर केही युवा हाम्रो सम्पर्कमा छन् के हो वास्तविकता ?
– अर्कै कर्णिकार भयो होला भाई । मैले त किन्या छैन ।
अनि तपाईंले लिखित कागजात गर्नु भएको छैन र ती युवाहरुसँग ?
-अहँ मैले छैन ।
अनि तपाईंले ब्ल्याङ्क चेक पनि दिनु भएको रहेछ नी ?
खोई म कहाँ आउनु पर्थ्यो । म कहाँ आउनु भएन । मैले केही कारोबार गर्यो पनि छैन ।
तपाईंले २ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक दिनु भएको रहेछ । त्यो मध्ये इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ७५ लाख रुपैयाँको चेक अहिले पनि रहेछ । तपाईंले चप्पल कारखानाबाट भित्र रहेको अफिसमा बोलाएर भेट्नु भएकोरहेछ । उहाँहरुसँग पैसा लिएर जग्गा किन्नु भएछ र उहाँहरुकौ पैसा फिर्ता किन नगर्नुभएको ?
– मैले जग्गा किनेकै छैन । मैले कहाँबाट पैसा दिनु । मेरो नाममा हो भने को बराल भाइहरु हो मसँग सम्पर्क गरे भो नी । तपाईं कहाँ गएर कुरा गरेर त पैसा आउँदैन ।
२०७४ साल भाद्र १ गते तपाईंले नै लिखित सम्झौता गर्नु भएको रहेछ नी ?
–हैन सुन्नु न । मेरो नाममा जग्गा भएको भए मैले पैसा दिनुपर्यो । मेरो नाममा जग्गा नआएपछि त मैले पैसा दिने कुरै भएन नी ।
यहाँको हजुरबाको (लिखित कागजातमा भएको नाम) हिराराज कर्णिकार हो ?
– होइन होइन । हिराराज कर्णिकार भन्ने मेरो दरसन्तानमा कोहिपनि थाहा छैन ।
अनि तपाईंले नै गर्नुभएको कागजातमा हिराराज कर्णिकारको नाति लक्ष्मिराज कर्णिकारको छोरा भन्ने उल्लेख छ नी ?
– लक्ष्मिराज कर्णिकार मेरो बुवा हो । तपाईंले भने अनुसार मेरो नाममा जग्गा आएको छैन । आएको भए मात्रै मैले पैसा दिनुपर्थ्यो ।
यहाँले ती युवाहरुसँग पैसा लिनु भएको होइन ?
– निरन्जन र उनीहरुबीचमा के लफडा थियो । मलाई मेरो नाममा राखिदिने भन्ने कुरा गर्यो । त्यो कुरा अगाडी बढ्न सकेन । निरन्जन भन्नेले मेरो करिबन साढे ४/५ करोड पैसा लिएर हिँडेको छ । त्यो मान्छे गायब छ । त्यो मान्छेलाई खोजेको ३ वर्ष भयो । मैले पुलिसमा पनि रिपोर्ट गरेर राखेको छु । मैले जग्गाको काम कहिल्यै गर्दिन । ती भाईहरु एक पटक मकहाँ आएको थियो । उनीहरुले जे–जे भन्यो मैले त्यही गरिदिएको हो । मेरो नाममा जग्गा आयो भने म पैसा तिरिदिन्छु । मलाई लाग्छ ती भाइहरुलाई पनि निरन्जन भन्ने फसाएको जस्तो लाग्छ । मलाई थाहा छैन है । अनेस्टली भनेको । तपाईंले मलाई भेटेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ।